Warbixinta Siyaasadda Caafimaadka iyo Badbaadada - COVID 19| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Bayaanka Siyaasadda Caafimaadka & Badbaadada - COVID 19
Bayaanka Siyaasadda Caafimaadka & Badbaadada - COVID 19
Sida uu dhigayo Sharciga Caafimaadka & Badbaadada ee Shaqada (1974) Dragons Head Shop Ltd waxay fahmayaan waajibaadyadayada, illaa inta macquul ahaan macquul ah, si ay u gutaan waajibaadka sharciga ah ee nalooga baahan yahay. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo uu jiro cudurka faafa ee Coronavirus, waxaan aqoonsannaa waajibaad daryeel oo dheeri ah oo qof walba ah. Sidaa darteed waxaan hiigsan doonnaa:
Ilaali u -hoggaansanaanta shuruudaha Xeerka Caafimaadka & Badbaadada ee Shaqada iyo Xeerarka la xiriira iyadoo la tixgelinayo khataraha nafleyda.
Sii wad inaad siiso xaalado shaqo oo badbaado leh oo caafimaad qaba dhammaan shaqaalaheena, qandaraasleyaasha hoose, macaamiisha, iyo booqdayaasha annagoo sameyneyna wax -ka -beddelka goobta shaqada sida loogu baahan yahay si qof walba looga ilaaliyo fayraska, waxaan ku shaqeyneynaa oo keliya khadka tooska ah si aan u fulino amarrada; macaamiisha maxalliga ahi waxay diyaarin karaan waqti ku habboon oo ay ka soo qaataan amarradooda dhinaca kerbside, oo ka baxsan xafiisyadeena. Waxaan qaadi doonnaa dhammaan tallaabooyinka habboon ee ku aaddan fogeynta bulshada waxaanna ka filan doonnaa macmiil kasta.
Bixi ilo ku filan si loola socdo oo loo taageero waxtarka joogtada ah ee caafimaadkayaga shaqada, badbaadada iyo nidaamka maareynta daryeelka oo ay ku jiraan tallaabooyinka sugan ee COVID.
Bixi macluumaad ku filan, waxbarid, tababar, iyo kormeer si loo hubiyo u hoggaansanaanta joogtada ah ee maareynta COVID iyo in dhammaan dadka ay ka warqabaan halista COVID 19 iyo sida naftooda loo ilaaliyo.
In siyaasaddan H&S iyo nidaamka maareynta ee la xiriira si joogto ah loola socdo, dib loogu eego, loona wada xiriiro si loo hubiyo in nidaamyada COVID ay ahaadaan kuwo waxtar leh oo qof walba yaqaan.
Si kor loogu qaado qabanqaabada daryeelka si loo hubiyo in heerarka nadaafadda wanaagsan mar walba la ilaaliyo.
Sii dariiqooyinka wadatashiga joogtada ah ee dhammaan xubnaha shaqaalaha wax kasta oo ku saabsan caafimaadka shaqada, badbaadada, iyo arrimaha la xiriira daryeelka.
Hirgelinta diyaarinta xaaladaha degdegga ah si qof walba u fahmo waxa la sameeyo haddii ay dhacdo dhacdo weyn oo ay ka mid yihiin suurtagalnimada ama kiisaska la xaqiijiyey ee COVID 19.